အပျော် ပေါ့ ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » အပျော် ပေါ့ ။
အပျော် ပေါ့ ။
Posted by Mလုလင် on Dec 18, 2011 in Photography | 23 comments
ခုတလော ရွာထဲမလဲ .. ဒေါန တွေချည်းပဲ ။ ရှေ့ တစ်ပတ်ထဲ မှာ ကယား ပြည်နယ်ဘက် သွားမယ်။ ၁ ပတ်လောက်တော့ ကြာမယ်။ ပြန်လာရင် ပုံတွေ ကြည့်ဖို့သာပြင်တော့ (ဆာဗာ အတွက်တော့ အားနာပါတယ်။) ညရှုခင်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်ချင်ပေမယ့်။ ရိုက်ရခက် နေတယ်။ ညဘက်ကြီး ဘယ်သူက သူတို့ အိမ်ပေါ်ပေးတက်ချင်ပါ့မလဲနော့။
ခုဟာက Dec-25 နီးတော့ ရန်ကုန်မြို့ထဲ မှာ မီးထွန်းထားတာလေးတွေ ပါ။ ဂျပွန် မှာလိုတော့ ဘယ်လှပါ့မလဲဗျာ။ ဒီက လူတွေ လုပ်မစားတတ်သေးဘူးဗျ …။ ဒီပို့စ် ကတော့ အပျော် ပေါ့ဗျာ.. စိတ် အစဉ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နဲ့ အေးချမ်း ကြပါစေဗျာ..
ပုံ (၁) ဖယ်လ်တာ ဆိုတာကြီး ကိုဘာမှန်းမသိခင် ငယ်ငယ်တုန်း ကရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။ ခုလဲ ..ငယ်ငယ် ကအတိုင်းပါပဲ :-)
ပုံ (၂) Excel ပါ .. ပလက်ဖောင်းပေါ်ကပဲ ရိုက်ရတာဆိုတော့ ရှုထောင့် က ရိုးနေတယ်။ ဆောရီးပါဗျာ.
ပုံ (၃) ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းမပေါ်မှာပါ။
ပုံ (၄) ပြည်လမ်း မှာပါ။
ပုံ (၅) ပြည်လမ်းပေါ်က ဘီယာဆိုင်..
ပုံ (၆) ကန်ဘောင် ပေါ်က အလင်းသီး
ပုံ (၇) စိုင် ကို ဒီလို ရိုက်ရမှာရား ဟင် …ငင်ငင် .. (အခွင့်မရှိပဲ .. wallpaper မသုံးရ)
ပုံ (၈) စိုင် ကို ဒီလို ရိုက်ရမှာရား ဟင် …ငင်ငင် .. (2) (အခွင့်မရှိပဲ .. wallpaper မသုံးရ)
ဘာသာရေး မနွယ်ပါ။ အပျော်တမ်း တစ်ယောက် ရဲ့ လက်ဆော့မှု ဟုသာမြင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ သဘာဝ အမြင်နဲ့ မကြည့်ပဲ ဟာသ အမြင်နဲ့ ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
ခွင့်ပေးလဲ wallpaper မသုံးမှန်း ကြိုသိနေလို့ ကြိုကန်ထားတာပါ… :-)
လှလိုက်တဲ့ပုံတွေ၊ ရန်ကုန်မှာနေပြီး ညဖက်ထွက်ဖြစ်ပေမဲ့အဲလောက်လှမှန်းအခုမှသိတာပါပဲ။ ကျေးဇူးပါ။ ဓါတ်ပုံပညာကြောင့်ပိုလှသွားတာဖြစ်မှာပါ။
အစ်မ သဲနုအေး .. အောက်ဆုံး နှစ်ပုံ ကော လှလား ငင် …
ပုံ-၁ က နည်းနည်း ထပ်စောင့်ရင် ပိုလှမှာ…
ခင်ဗျား သိပါတယ် ..မစောင့်ဘဲလဲနေမှာ …..မရိုက်ဘဲလဲ နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး..
ဘယ်သွားဖွက်ထားတာတုန်း…. ဟွန်း ….
excel က ကျုပ်တို့ ရုံးရှေ့ဗျ …..
သတိရတွားဘီ…… ရင်ထဲမကောင်းတော့ …
ကန်ဘောင်နဲ့ ဘီယာဆိုင် ကတော့ …..
သက်သက် မသွားနိုင်သူတွေ သွားရည်တမြားမြားကျအောင်
လုပ်ထား တာဘဲ … ရှင် …၀ဋ်လိုက်လိမ့်မယ်……
စိုင်ကို အဲ့လို ရိုက်ရင် စိုင် လိုက်သတ်မှာပေါ့ဗျာ …
နောက်တာပါ M-Lulin ရေ …
ပုံတွေအားလုံး နှစ်သက်သဘောကျပြီး ..
အထူးသဖြင့် multiplicity idea နဲ့ lighting အတွက် လေးစားပါကြောင်းဗျာ
ပုံ (၁) က ရှိတော့ဘူးဗျ။ 10-22 နဲ့ ကစ်ထားတာ ဘေးကတစ်ယောက် စီကငှားပြီးကစ်ရတာ။ ၀ယ်ကလဲ ၀ယ်နိုင်ဘူးရယ်။ ကန်ဘောင် လဲ. ညဘက်ညဘက် လူရှုပ်ပါ့။ 10 နာရီလောက် သွားတာတောင် လူရှုပ်တုန်း။ အဲ့ဒီ့ ဘီယာဆိုင်က ၀န်ထမ်းတွေက သေမလိုပဲ ခါးတွေအတင်းချိုးပြီး ပြုံးပြုံးနဲ့ order မှာတော့မှ တလွဲ ချည်းရေးတာ။ ဘယ်လိုလဲ … ကျွန်တော် ချောတယ် မဟုတ်လား … :-)
အောက်ဆုံးပုံကလေ ဘယ်ဘက်ကစရီရင် ၁ ချောင်းမြောက် ဓာတ်ပုံဘောင်ပေါ်တင်ထားတဲ့လက်က opacity နည်းလို့ထင်တယ်နော့။ အောက်ခံ ဓာတ်ပုံဘောင်ကို မြင်နေရတယ်။ စတိုင်လုပ်ထားတာလားဟင်
water-melon က photoshop နဲ့ design လုပ်ထားတာလို့ ထင်နေပုံရတယ်။ photography categories အောက်ထဲမှာ ထည့်ထားတာမို့ …. M-Lulin တင်တဲ့ ပုံ အားလုံး က ကင်မရာ နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေချည်းပါပဲ .. image editing software သုံးပြီး ဖြတ်-ညှပ်-ကပ် လုံးဝ မလုပ်ထားပါဘူးဗျာ။ . စတိုင်မဟုတ်ပါဘူး .. အမှတ်စဉ်ရီ ပြီး မီးထိုးထားတာပါ။ နှစ်ယောက် လုပ်ရတာဆိုတော့ နဲနဲ လွဲတာ ပေါ့ဗျာ။ ဒါတောင် ရီဟာဇယ် – ၈ ခေါက် လောက် လုပ် ထားရတာနော့ ….. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ …
မြို့ပြပုံတွေနဲ့စာရင်.. တောကျတဲ့ပုံတွေ ပိုကြိုက်မိတယ်..။
ရတယ် သူကြီး .. မြန်မာ့ပုံရိပ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အတွက် ပုံစု နေတယ် သူကြီး။ ဆု ရရင်ရ . မရရင် တင်ပြီးသားပဲ။ ရခဲ့ရင်တော့ cross မျဉ်းနဲ့ တင်ရမယ်ထင်တယ်။
နံပါတ် ၅ ပြည်လမ်းက ဘီယာဆိုင်ပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
လမ်းမီးက star လေးဖြစ်နေလို့။
စိုင်မှ ဟုတ်ရဲ့လား အမ်လုလင်ရယ်။
သမင်၊ ဒရယ်၊ ဂျီငယ်၊ စိုင်၊ ဆတ် ဆိုတော့ကာ ….
ခြင်္သေ့ များ ဖြစ်နေသလားလို့
အန်တီ မမ… စိုင် ဆိုတာ စကားဝှက် နဲ့ မော်ဒယ် ကိုပြောတာပါ။ မော်ဒယ် ကို အဲလို creative shooting နဲ့ ရိုက်လို့ ရတော့ အနော်လဲ ခေါင်းကွဲ နေလောက်ပြီ။ အဲဒါကြောင့် ပြောတာ. တော့ ကလုလင် … တော့လုပ်ပုံ နဲ့ ထမင်းတောင် နပ်မှန် ပါ့မလား …… တဲ့ .. :-)
မော်ဒယ်ဆိုတာ ကင်မရာမန်းအတွက် သားကောင်မဟုတ်ဘူးလား။
မိန်းကလေး မော်ဒယ်တွေကို လှလှပပ စိုင် လို့ ရေးကြတာထင်လို့..
ခု မော်ဒယ်က လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ပုံလို ယောင်္ကျားလေးပုံလည်းထင်လို့
ခြင်္သေ့လို့ ပြောမိတာ မှားသွားတယ် ထင်တယ်
ဟုတ်တယ် အန်တီ မမ, မမှားဘူး . အဲ့ဒါ ယောင်္ကျားလေး ပုံ ကြီး .. ကျွန်တော့ ပုံလေ …သူများ တကာ သားသမီးကို အဲ့ လို ပုံဆိုး ပန်းဆိုး ဖြစ်အောင် သွားရိုက် ရင် .. ဟို က ပြန်ရိုက် လိမ့်မယ်။.. :-)
ကျနော်ညကိုတော့ လှအောင်မရိုက်တတ်တာ အမှန်ပါ။
ဓါတ်ပုံပညာမတတ်တော့ ပညာသည်အပြောတော့ မပြောနိုင်ပါကွယ်။
ဦးပေါက် .. ည ဘက်ရိုက်ဖို့ manual mode ပဲလိုပါတယ်။ ညဘက် မှောင်တော့ အလင်းများများ ၀င်ချိန် ရအောင် shutter speed ကို ကြာကြာ ထားမယ်။ 30 second လောက်ထားမယ်။ အဲ့ဒီတော့ Tripod သုံးမှဖြစ်မယ်။ DOF, ပြတ်သားမှု နယ်ပယ် များအောင်လို့ apeture ကို ကျဉ်းမယ် F Number ကြီးကြီး ထားမယ်။ အဲဒါဆို ဖြစ်ပြီ .. မီး ထိန်ထိန် ထွန်း ထားတဲ့ subject ပဲလိုမယ်။ အဲဒါ ဆို ရိုက်လို့ ရပြီ …camera ကောင်းရင်တော့ ISO မြင့်မြင့် လေးထားနိုင်ရင် shutter speed ကို နည်းနည်း ပဲ ထားလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့ 1000D ဆို ISO 400 နဲ့တင် noise တွေ ၀င်နေပြီ… အဆင်ပြေဘူး …
ခြောက်မိုင်ခွဲ ဓမာရုံ လမ်းမှာ Internet Cafe တစ်ခု site ရလို့ လုပ်ဖူးတယ်။ လှိုင်နဲ့ မစိမ်းဘူး .. ကြုံရင် ၀င်ရိုက်သွားမယ်။ အမှတ်တရ ပေါ့. .. ..
ဟုတ်တယ် အန်ကယ်ကြီး ရေ ကျွန်တော် လဲညမင်းသား လုံးလုံးကိုဖြစ်နေတော့တာ။ အရင် ပို့စ် တုံးကလဲ night version ပဲ ကစ်ထားတာ။ :-) ညဘက်ပဲ အားလို့ပါဗျာ …
ရင်း ညဖက်ကြီး အဲဒီနားမှာ
ကို ကမ်းကြီး ဘာလို့ ကျောချမ်းတာတုန်းဗျ …. သိပရစေဂျာ … ကောင်မလေးတွေ များလို့တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော့ ..